IValeria-uMhlaba wakho ube nguMgangatho kaSathana-Ukuhla eBukumkanini
"UMariya, uMama olusizi" ukuya ku	UValeria Copponi NgoJanuwari 19th, 2022:
Ntombi yam, kungekudala uya kuba ngcono, kodwa ungafuni ukuphiliswa, njengoko sinjalo ndisafuna ukubandezeleka kwakho. Uyazi kakuhle ukubandezeleka kwam, kwaye okwangoku ndisaqhubeka ndinceda uNyana wam kuba ndifuna ukuba inani elikhulu labantwana bam likwazi ukuvuya ngokukhawuleza kuzuko lokubuya kukaYesu kwiplanethi yakho eyingozi. “Ukubuya” kukaKristu akuthethi kulawulo lukaYesu ngokwasemzimbeni emhlabeni, “iminyaka eyi-millenary” ekhatywayo yiCawa yamaKatolika, kodwa kulawulo lukaYesu ngeCawa ehlaziyiweyo emva kokoyiswa komchasi-Kristu. Inqaku lomguquli. Nguye kuphela oya kuzisa uxolo, uvuyo, inyaniso, ubuzalwana kunye nothando lokwenene emhlabeni wakho. Ntombi yam, qhubeka unikezela ngeembandezelo zakho kwaye kungekudala uya kuvuya kule nto uyinikileyo.
Umhlaba wakho ngoku usuke waba ngumhlaba kaSathana, kunye nesono sakho, ukungathobeli kwakho, intiyo yakho ngeBandla lenyaniso. Uwubethe umzimba kunye nomoya woNyana wam okwexesha leshumi. Kungekudala yonke into iya kufezekiswa, [kodwa] ngelishwa, ingaba ukholo lwakho luya kuba namandla ayimfuneko oya kuwadinga ukuze usindiswe? Bantwana bam, ndingahlala ndithembele kuni, masalela am, musani ukundiphoxa. Zamkele ngothando izilingo ezinzima ekuya kufuneka ujamelane nazo, yaye siya kukwazi ukudumisa nokubulela uThixo kunye ngesipho sobomi obungunaphakade.
Ngoku uyazi ukuba ubomi bomntu abunakuze bukunike olo vuyo lugqibeleleyo oya kuba nalo ngothando olulodwa lukaThixo, uMdali neNkosi yezinto zonke. Ndinithanda kakhulu: thandazani ninikele iimbandezelo zenu kube kanye, eziyimfuneko ekuzalisekeni ngokupheleleyo kwecebo likaThixo. Ndiyanithamsanqela, bantwana bam; zisuleni iinyembezi zam. Ndinithanda nonke.
“Ukubuya” kukaKristu akuthethi kulawulo lukaYesu ngokwasemzimbeni emhlabeni, “iminyaka eyi-millenary” ekhatywayo yiCawa yamaKatolika, kodwa kulawulo lukaYesu ngeCawa ehlaziyiweyo emva kokoyiswa komchasi-Kristu. Inqaku lomguquli.
UGisella-Intshutshiso Iya kuba... →